Fototra basy / valves - Teknika fampiharana doka
Basy fampiharana 1-singa ambany fomba
Ny DAG001 dia basy fampiharana 1-singa ho an'ny vokatra fluida sy pasty, hamongorana sy hampiharana vokatra 1-singa. Isan-karazany ny adapters sy ny extrusion / spraying nozzles dia misy ahafahana manome ny zavatra ilain'ny fangatahana.
Published in Guns / Valves
1-singa basy fampiharana be dia be
Ny DAG002 dia basy fampiharana fantsom-pahalalana avo lenta 1 mba hanaparitahana ny vokatra 1-singa toy ny adhesive sy tsiranoka hafa.
Isan-karazany ny karazana adapters sy extrusion nozzles dia hita mba hanomezana ny filàn'ny fangatahana.
Ny basy fampiharana DAG 003 dia mety amin'ny fitrandrahana otomatis, famafana sy fampiharana ny vokatra 2-singa. Ny basy dia matetika ampiasaina amin'ny mixeur statista, saingy azo atao koa ny manamboatra ny fampifangaroana dinika koa.
Ity basy ity dia novolavolaina modely ary misy safidy hafa mba hamenoana ny filàn'ny fangatahana rehetra. Izy io dia mahatohitra tsindry maimaim-poana amin'ny fanafihana 300 bar.
Raha mila fanazavana fanampiny, azafady jereo ny pdf-folder etsy ambany.
▼Guns / Valves